यस्ता छन् पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका ७ रहस्यहरु, जानी राखौ
अगस्ट 19, 2019 अगस्ट 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments पुरुष, महिला
पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अस्तित्वबिना अर्को सम्भव छँदै छैन । त्यसकारण महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । अधिकाँश पुरुषलाई महिलाको बारेमा त्यति नै थाहा हुन्छ जति उनीहरुले देख्छन् र सुन्छन् । खासमा धेरै पुरुषलाई महिलाका रहस्यबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले होला एक साहित्यकारले महिलालाई ‘फरेन ल्याण्ड’ अर्थत विदेशी भूमिको सज्ञा दिएका छन् । कहिले काँहि पुरुषहरु महिलाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको ठानेर भ्रममा समेत पर्ने गर्छन् । किन कि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन महिलाले पुरुषलाई थाहै दिँदैनन् । यस्ता छन् पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका ७ रहस्यहरु, जानी राखौ ।
१. एक महिला अर्की महिलासँग प्रेम गर्छे
५. एक्लै हुँदा
← मानव स्वास्थ्यको लागि घिउकुमारीको प्रयोग
मांसाहार भोजन कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त ? →
सेप्टेम्बर 1, 2019 सेप्टेम्बर 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3